निषेधाज्ञा हुँदा पनि काठमाडौंमा दिनदिनै किन बढिरहेको छ कोरोना संक्रमण? :: विवेक राई :: Setopati
निषेधाज्ञा हुँदा पनि काठमाडौंमा दिनदिनै किन बढिरहेको छ कोरोना संक्रमण?
नक्साल, कोटेश्वर, कलंकी र कालिमाटी क्षेत्रमा भेटिएका छन् बढी संक्रमित
भदौ ३ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी छ। कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोक्न उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि यही समयमा उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको दर दिनदिनै बढेको छ।
आइतबारमात्र उपत्यकामा ४ सय २९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो उपत्यकामा अहिलेसम्म एकैदिन देखिएको धेरै संक्रमित संख्या हो। पछिल्लो एक साताको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि देशभरिका संक्रमितमध्ये ३० प्रतिशत बढी उपत्यकाकै हुन्छन्।
सोमबार बिहानसम्म उपत्यकामा झन्डै ५ हजार जना सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा ३ हजार ९ सय २०, ललिपुरमा ५ सय ४४ र भक्तपुरमा ४ सय २० जना संक्रमित छन्।
निषेधाज्ञामा मानिसहरू घरमै बसिरहेका बेला उपत्यकामा भने संक्रमण किन बढिरहेको छ भन्ने धेरैको चासो छ। अहिले उपत्यकामा दैनिक भेटिएका संक्रमितहरूमा अधिकांश स्थानीय रहेको इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ।
यसले संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिँदै गएको संकेत गर्छ।
महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्रध्वज अधिकारीले अहिले उपत्यकामा देखिएका संक्रमितहरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका क्रममा भेटिएका र स्वयं परीक्षण गराउनेहरू रहेको बताए।
'अधिकांश संक्रमितहरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा भेटिएका हुन्। साथै स्वत:स्फुर्त परीक्षण गराउनेहरूमा पनि संक्रमण देखिएको छ,' उनले भने।
उपत्यकामा अहिले भेटिएका संक्रमितहरू ट्राभल हिस्ट्री नभएको अधिकारी बताउँछन्। जसले संक्रमितहरूमा समुदायभित्रै कसैबाट संक्रमण सरेको हुन सक्ने संकेत गर्छ। अहिले सबै क्षेत्रका मानिसहरूलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। व्यवसायी, कर्मचारी, विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, दीर्घ रोगीलगायतलाई संक्रमण देखिएको छ।
अहिले महाशाखाको पहिलो प्राथमिकता नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ रहेको अधिकारीले बताए।
'कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि इडिसिडी र सिसिएमसीको टिम खटिएका छन्। विभिन्न पालिकाहरूमा छुट्टै ट्रेसिङ गर्ने टिम छन्। उहाँहरूले सिफारिस गरेकाहरूको परीक्षण भइरहेको छ,' उनले भने, 'त्यसबाहेक फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको पनि परीक्षण भइरहेको छ।'
उनले सिसिएमसीको टिमले उपत्यकाका 'हाइ रिस्क' बढी जोखिम भएका ठाउँहरूबाट स्वाब संकलन गरिरहेको बताए। अहिले उपत्यकामा बढी संक्रमित भेटिएका नक्साल, कोटेश्वर, कलंकी, कालिमाटी क्षेत्र हुन्।
एक जना संक्रमितको 'क्लोज कन्ट्याक्ट' मा आएकाहरूमध्ये औसतमा चार जनाको परीक्षण गरिएको उनले बताए। योसंख्या पहिलेभन्दा कम रहेको उनी बताउँछन्। अधिकारीले भने, 'निषेधाज्ञा भएको र मानिसहरू पनि पहिलेभन्दा सतर्क भएर बस्नुभएको छ। त्यसैले संक्रमितको सम्पर्कमा आउनेहरू कम हुन थालेका छन्।'
उपत्यकामा दैनिक भेटिएका संक्रमित सोही दिनका संक्रमित होइनन्। अधिकारीका अनुसार उनीहरू दुई दिनअघिका संक्रमित हुन्। स्वाब संकलन गरेपछि रिपोर्ट आउन दुई दिनसम्म लाग्ने गरेकाले दैनिक देखिएका संक्रमितहरू सोही दिनका नहुने उनले बताए।
त्यसरी स्वाब दिएपछि नतिजा नआइन्जेल घरमै बस्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिले बढी सावधानी अपनाउनु पर्ने अधिकारीको सुझाव छ।
उनले भने, 'स्वाब दिएपछि सबैले आफू सम्भावित संक्रमित हो भन्ने सोचेर सोही अनुसार सतर्क भएर बस्नुपर्छ। नत्र संक्रमण पुष्टि भए त्यसले अरूमा सार्ने र थप जोखिम निम्तिन्छ।'
उनले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने टिमले पनि स्वाब संकलन गर्ने क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सतर्क भएर बस्न सुझाउने गरिएको सुनाए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि स्वाब दिएपछि सतर्कता अपनाएर बस्न अपिल गरेको छ।
उपत्यकामा संक्रमण जोखिम बढेको भन्दै थप सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको अधिकारीले बताए।
पछिल्लो समय उपत्यकामा पनि लक्षणसहितका संक्रमितहरू बढ्दै गएका छन्।
'सुरूसुरूमा ९८ प्रतिशतसम्म संक्रमित लक्षणविहीन थिए तर अहिले देखिएका संक्रमितमा १५ देखि २० प्रतिशतमा लक्षण देखिएको छ,' उनले भने।
विज्ञहरूको अनुसार लक्षणविहीन संक्रमितले भन्दा लक्षणसहितका संक्रमितले संक्रमण छिटो सार्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले पनि लक्षणसहितका संक्रमित बढ्नु समुदायकै लागि जोखिम हुने उनीहरूको भनाइ छ।
अहिले उपत्यकामा संक्रमण समुदायस्तरमा गइनसकेको अधिकारीको दाबी छ। उनी भन्छन्, 'अहिले पनि संक्रमण क्लस्टरमै छ। समुदायमा गइसकेको छैन। निश्चित ठाउँहरू जस्तै कम्पनी, ब्यारेक, व्यवासायी लगायतमा देखिएको छ। त्यस्तो अन्यन्त्रित रुपमा संक्रमण देखिएको छैन।'
उपत्यकामा संक्रमण बढिरहेका बेला कसरी नियन्त्रणको कामलाई अघि बढाउने भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै अलमलमा छ। हाल निषेधाज्ञा जारी गरेर नियन्त्रणको काम गरिरहेको भए पनि अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा मन्त्रालय नै स्पष्ट छैन।
मन्त्रालयका कोभिड फोकल पर्सन महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने संक्रमण दर बढिरहेकाले कसरी अगाडि बढ्नेबारे सम्बन्धित विज्ञ लगायत सबैसँग छलफल भइरहेको बताए। उनले हाल निषेधाज्ञा जारी रहेकाले काम गर्न सहज भएपनि अब के गर्ने भन्नेमा टुंगो भइनसकेको जनाए।
'निषेधाज्ञा नखोलौं धेरै कुरालाई असर गर्छ। फेरि खोलौं संक्रमण ह्वात्तै बढ्छ। त्यसैले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल अघि बढिरहेको छ। विज्ञहरूसँग पनि यसबारे परामर्श लिने काम भइरहेको छ,' श्रेष्ठले भने।
विज्ञहरूले भने यहीँ स्थिति रहे उपत्यकामा संक्रमणको भयावह स्थिति हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
जनस्वास्थ्यविद् डा. राजेन्द्र विसी भन्छन्, 'संक्रमण भित्रभित्रै फैलिरहेको छ। सरकारले निषेधाज्ञाको सदुपयोग गरेर परीक्षण र ट्रेसिङलाई व्यापक नबनाउने हो भने स्थिति भयाभव हुन्छ।'
उनले निषेधज्ञा रहेकाले स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहने मानिसहरूले गराउन नपाएको भन्दै संक्रमण देखिएको भन्दा धेरै रहेको दाबी गरे।
जति धेरै परीक्षण गर्‍यो त्यसले समुदायमा संक्रमणको अवस्था थाहा हुने उनले बताए।
निषेधाज्ञा दीर्घकालीन समाधानको उपाय नभएको भन्दै डा. विसीले यसलाई निश्चित अवधि लागू गरेर नियन्त्रणको नीति तय गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'कम्तिमा चार साता गर्नुपर्छ तर त्यो अवधिमा व्यापक परीक्षण र ट्रेसिङ गरेर संक्रमणको कुन अवस्था छ भन्ने कुराको यकिन गर्नुपर्छ। अनि त्यहीँ अनुसार आगामी रणनीति तय गर्नुपर्छ।'
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ १५, २०७७, ०७:४६:००